60 Telefishanka labaad ee NYE
SKU: 60 TV NYE Meesha Category: MISC
Kooxdu waxay soo caan baxday DJ video, oo ku ciyaaraya kubbadaha disco iyo saameynta miraha. Magacaagu wuxuu u muuqdaa mid weyn oo masuul ah sidaa darteed qofna ma seegi doono. Noocyo la dhejin karo oo ku dheggan santuuqa muusikada nagala soo xiriir wixii faahfaahin ah.
DJ Video Loop - Diiwaanka Diiwaangelinta
Ha dhigin shaashad madow inta lagu guda jiro! Xitaa haddii aadan haysanin fiidiyowga loogu talagalay hees gaar ah, waxaad weli haysan kartaa muuqaalo muuqda si aad u sii wadato socodka. Si ka fiican, ka dhig mid ka mid ah wareegyada Video-ga DJ, loo qaabeeyay magacaaga. Dib-u-hagaajinta astaantaada shakhsi ahaaneed iyo inaad iska ilaaliso in dadku u maleynayaan in go'aadaada la dhammaystiray sababtoo ah shaashadu way xirantahay Taariikhaha maqalka iyo sariiraha muusikada ayaa la heli karaa fiidyowgan, nagala soo xiriir wixii faahfaahin ah.
Dhamaan Dj Dj Tube si wanaagsan u bilow! Tani waxay si taxadar leh u heli doontaa fiiro gaar ah. "Waa nin aad oo dhan la sugayay." Qof Screammmmmmm "Waa mid ka mid ah iyo DJ kaliya (MAGACAAGA) From (Your lagu caweeyo ama Magaca Company - Magaca City) --- waxaa Hit (sfx: Qarax).! Fiiri fiidiyowga ficilka ficilka hoosta! Ku dheji kharash la'aan dheeraad ah!
Muuqaalka Lion Lion ee Logo
DJ video intro ee qaabka ugu muhiimsan ee logo ee Lion Lion Gate. Cimilo caadi ah, madadaalo ah ayaa dareensan in dib loo sawiray magacaaga DJ iyo qoraallada gaarka ah. Fiidiyoogan DJ waa inuu hubiyaa inuu dareenka ku qabsado. Aad u weyn sida DJ intro bilowga ama qorshahaaga, inaad xirto habeenkii ama, heck, midigta dhexe. Sida muuqaalkeena oo dhan DJ dhibcaha iyo DJ videos waa tifaftiri, tayo sare, video High Definition video. ADD caado ama lab ama dhedig qayb ahaan sawir fiidiyoow loogu talagalay kaliya $ 50.
XIDHIIDHA WAQTIGA LAYLI Fiidiyowga sawir darrada ah ee lagu beddelayo ka gudubka laba BPM ee kala duwan! "Isku darka iyo kuwa laba-jeer ah - (qarax), Tani waa Dj (MAGACA MAGACA) ka yimid (MAGACA ama MAGACA COMPANY)! * oo lagu daro calaamadahaaga gudaha fiidiyowga adigoon wax lacag ah ku lahayn!